Xiddiga ku guuleysan doona abaal-marinta Ballon d’Or 2021 oo si qarsoodi ah loo helay… (Ka bogo sida ay xiddiguhu codadka u kala heleen & Kaalimaha ay kala galeen) – Gool FM
Haaruun October 27, 2021
(Yurub) 27 Okt 2021. Waxaa la shaaciyey xiddiga ku guuleysan doona abaal-marinta Ballon d’Or 2021 oo ay ku tartamayaan ciyaartoy waa weyn sida lagu shaaciyey xog qarsoodi ah oo lagu faafiyey baraha xiriirka bulshada.
Sida lagu shaaciyey barta xiriirka bulashada ee Twitter-ka Robert Lewandowski ayaa ku guuleysan doona abaal-marinta Ballon d’Or 2021, waxaana uu sanadkan tartanka abaal-marintan ku garaaci doonaa Lionel Messi iyo Jorginho.
Xiddiga kooxda PSG ee Lionel Messi ayaa kaalinta labaad kaga dhammaysan doona tartanka abaal-marintan, halka Jorginho oo loo saadaalinayey hanashada abaal-marintan uu ka soo muuqday kaalinta shanaad.
Warqadda lagu shaaciyey magacyada xiddigaha iyo kaalimaha ay kala galeen, waxaan laga arki karin codadka ay heleen Messi iyo Ronaldo, inkastoo ay ku kala jiraan kaalinta labaad iyo midda sagaalaad.
Liiska 10-ka sare iyo sida ay u kala geli doonaan xiddigaha tartankan abaal-marinta marinta Ballon d’Or 2021 & Codadka ay kala heleen halkaan hoose ka eeg:-
1- Robert Lewandowski 627 cod
2- Lionel Messi ————-
3- Karim Benzema 526 cod
4- Mohamed Salah 412 cod
5- Jorginho 197 cod
6- Kylian Mbappé 136 cod
7- N’Golo Kanté 97 cod
8- Erling Haaland 78 cod
9- Cristiano Ronaldo ————-
10- Kevin De Bruyne 41 cod
Si kastaba ha noqotee User-ka Twitter-ka ee qishkaan weyn shaaca ka qaaday oo barta twitter-ka ku soo gala @Jeboisdeleauu ayaa sidoo kale ah midkii bixiyey qishkii abaal-marinta Ballon d’Or sanadihii 2018 & 2019.
2018 waxa uu shaaciyey in Luka Modric uu ku guuleysan doono, halka 2019 uu shaaciyey in Messi uu qaadi doono waana mid sidaasi u dhacday labadaasi sano, 2020 waxaa bixinta abaal-marintan loo baajiyey Korona Fayras awgii, markale ayuu nagu wargelinayaa in 2021 uu qaadi doono Ballon d’Or Weeraryahanka Bayern Munich ee Robert Lewandowski.
Ma kula tahay in Robert Lewandowski uu ku guuleysan doono abaal-marinta xiddigaha ugu fiican Adduunka 2021.?
RASMI: Barcelona oo shaacisay dhaawaca Ansu Fati... (Sidee wax usoo gaareen?)